You have other options not filled in
သင်၏ ပါဝင်မှု အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
An open letter about the survey of the awareness of the construction of Kunming asaregional international center city
Welcome to participate in this questionnaire survey. Entrusted by the Political Research Office of Kunming Municipal Committee, we will carry outasurvey on the awareness of the construction of Kunming asaregional international center city from May5to 15, 2019.
Nowadays, Kunming has embarked onanew journey to constructaregional international center city. We sincerely hope to get known about the degree of awareness, recognition and participation of all sectors of society in the construction of regional international center city through this survey. You are cordially welcomed to participate in this survey. At the same time, you are encouraged to put forward your opinions and suggestions on the channel which is specially for the interaction of government and the public on Cailong Club.
After the survey, we will randomly select 300 people from the participants, each of whom will be rewarded with 50 yuan as phone charge.
Kunming Information Hub
ကူမင်းမြို့သည် ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက်မမြို့ကို တည်ဆောက်ခြင်း အတွက် သိရှိနားလည်မှု အကြောင်းကို စုံစမ်းလေ့လာသည့် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
လေးစားအပ်ပါသော အင်တာနက်သုံးသူများ၊ မိတ်ဆွေများ
မင်္ဂလာပါ။ ဤအကြိမ် စုံစမ်းမှုကို ပါဝင်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကူမင်းမြို့ပါတီကော်မတီ ပေါ်လစီ သုတေသနရုံးသည် တာဝန်လွှဲအပ်ပေး ခြင်းအားဖြင့် Kunming Information Hub သည် ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလ ၅ရက်မှ ၁၅ရက်အထိ ကူမင်းမြို့သည် ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချကမမြို့ တည်ဆောက်ခြင်း အတွက် သိရှိနားလည်မှု အကြောင်းကို စုံစမ်းလေ့လာခြင်း ဆောင်ရွက်မည်။
အခု ကူမင်းမြို့သည် ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက်မမြို့ တည်ဆောက်ခြင်း ခရီးစဉ်သစ်ကို စတင်ဆောင်ရွက်ပါပြီ။ ဤအကြိမ် စုံစမ်းလေ့လာခြင်းအားဖြင့် လှုမှုရေး အဘက်ဘက်သည် ကူမင်းမြို့ ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက်မမြို့ တည်ဆေက်ခြင်း အတွက် သိရှိနားလည်မှု၊ သဘောတူညီမှု၊ ပါဝင်မှု နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို အစစ်အမှန် နားလည်နိုင်မည် မျှော်လင့်ပါသည်။ မင်းသည် မင်းသည် ပါဝင်ရန် စေတနာထက်သန်စွာ ကြိုဆိုပါသည်။ ထို့ပြင်၊ မင်းသည် စိုင်လုံဝက်ဘ်ဆိုက် အစိုးရနှင့် ပြည်သူပြည်သား အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်း ချန်နယ်လ် မှတစ်ဆင့် မိမိ၏ ထင်မြင်ချက်နှင့် အကြံများကို ရေးသားတင်ပြရန် ကြိုဆိုပါသည်။ လှုပ်ရှားမှု ပြီးဆုံးပြီးနောက် ပါဝင်သူ အယောက်(၃၀၀)ကို ရွေးချယ်၍ လူတစ်ယောက် ဖုန်းခ အယွမ်(၅၀)ကို ချီးမြှင်မည်။
မင်းသည် ပါင်ဝင်ထောက်ခံခြင်း အတွက် နှစ်နှစ်ကာကာ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
1.Do you know that Kunming is committed to constructaregional international center city?
Don’t interested in
2.Do you know what “regional international center city” is?
3.Do you support the construction of Kunming asaregional international center city?
4.Have you participated in the construction of regional international center city?
5.How do you know the information about the construction of Kunming asaregional international center city? (multiple choice)
Chat with colleagues and friends
6.Do you know what are the three core contents of the construction of Kunming asaregional international central city ? (multiple choice)
Three city brands
7.What do you think are the main shortcomings of Kunming in the construction ofaregional international center city? (multiple choice)
8.What will you focus on to constructaregional international center city? (multiple choice)
Orientation of city development
Direction, goals, development path
Specific policy measures
City quality & image
Income level of residents
Education and medical security
Level of habitability and convenience
Quality of living and environment
9.Are you satisfied with the current construction progress of regional international center city?
10.What are your opinions and suggestions on the construction of Kunming asaregional international center city?
(၁) ကူမင်းမြို့သည် ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက်မမြို့ တည်ဆောက်နေသည်ကို သိသနည်း။
(၂) "ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက်မမြို့" မည်နည်း ဆိုသည် နားလည်သနည်း။
(၃)ကူမင်းမြို့သည် ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက်မမြို့ တည်ဆောက်ခြင်းကို ထောက်ခံသနည်း။
(၄) ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက်မမြို့ တည်ဆောက်ခြင်းကို ပါဝင်ခဲ့သနည်း။
(၅) ကူမင်းမြို့သည် ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက်မမြို့ တည်ဆောက်ခြင်းကို မည်သည့် နည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် နားလည်သနည်း။ (အဖြေများ ရွေးချယ်နိုင်သည်)
လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်၊ မိတ်ဆွေများနှင့် စကားစမြည်ပြောခြင်း။
(၆) ကူမင်းမြို့သည် ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက်မမြို့ တည်ဆောက်ခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းအရာ ဆိုသည် မည်နည်းကို နားလည်သနည်း။ (အဖြေများ ရွေးချယ်နိုင်သည်)
(၇)ကူမင်းမြို့သည် ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက်မမြို့ တည်ဆောက်ရာတွင် အဓိက ချွတ်ယွင်းချက် ဆိုသည် မည်နည်း။ (အဖြေများ ရွေးချယ်နိုင်သည်)
ပြည်သူလူထု၏ စားဝတ်နေရေး အာမခံချက်။
(၈) ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက်မမြို့ တည်ဆောက်ရာတွင် မင်းသည် မည်သည့်အဘက်ကို အဓိက အာရုံစိုက်သနည်း။ (အဖြေများ ရွေးချယ်နိုင်သည်)
မြို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေသတ်မှတ်ခြင်း။
ဦးတည်ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် နည်းလမ်း။
တိကျသော ပေါ်လစီနှင့် ဆောင်ရွက်နည်း။
မြို့၏ ဂုဏ်အရည်အသွေးနှင့် ရုပ်ပုံလွှာ။
ပညာရေးနှင့် ဆေးကုသရေး အာမခံချက်။
နေထိုင်မှုအတွက် လွယ်ကူစေသည့် အဆင့်အတန်း။
(၉) မင်းသည် အခုတလော ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက်မမြို့ တည်ဆောက်ခြင်း၏ ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာခြင်း အတွက် ကျေနပ်သနည်း။
မကျေနပ်ပါဘူး။ အကြောင်းရင်းကို ပြည့်စွက်ရေးသားပါ။
(၁၀) မင်းသည် ကူမင်းမြို့ ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက်မမြို့ တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် မည်သည့် ထင်မြင်ချက်နှင့် အကြံ ရှိသနည်း။
Please fill in the basic information
Yunnan province(except Kunming)
Democratic parties member
6.YOUR contact number
Note: After the event, we will draw 300 participants, each rewarding 50 yuan. Your contact phone information will only be used for phone billing.
၁။ အမေးဖြေသည့် သူ၏ အခြေခံ အကြောင်းအရာ
အသက် (၁၈)နှစ် အောက်
အသက် (၁၈)နှစ်မှ နှစ်(၃၀)အထိ
အသက် (၃၁)နှစ်မှ နှစ်(၅၀)အထိ
အသက် နှစ်(၅၀) အထက်
(၃) အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား
(၆)မင်း၏ ဖုန်းနံပါတ်(လှုပ်ရှားမှု ပြီးဆုံးပြီးနောက် ပါဝင်သူ အယောက်(၃၀၀)ကို ရွေးချယ်ပြီး လူတစ်ယောက် ဖုန်းခ အယွမ်(၅၀)ကို ချီးမြှင်မည်။ မင်း၏ ဖုန်းနံပတ်ဖြင့် ဖုန်းခပေးဖုံ့သာ အသုံးပြုသည်)
မှတျစု: အဖွဈအပကျြပွီးနောကျကနြျောတို့ 300 သငျတနျးသားမြားကိုဆှဲပါလိမျ့မယျ, လူတဈဦးနှုနျးစှဲခကျြ 50 ယှမျဆု။ သငျ့ရဲ့အဆကျအသှယျအခကျြအလကျမြားကိုသာတယျလီဖုနျးချေါဆိုမှုမြားပေးပို့ခွငျးအတှကျအသုံးပွုလိမျ့မညျ။